अन्तरास्ट्रिय श्रमिक दिवस र सार्थकता - Lekhapadhi विचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी १८ बैशाख २०७८, शनिबार १९:२३ मा प्रकाशित
बिश्व कोभिड १९ को महामारी बाट आक्रान्त भएको १ बर्ष भन्दा बढी भईसकेको छ। यसको संक्रमणको प्रभावले बिश्व अर्थतन्त्रमा मन्दी छाएको छ। बिकसित राष्ट्रहरु समेत यसको प्रभाबबाट नराम्ररी प्रभावित भएका छन्। नेपाल झनै यस संक्रमणबाट अछुतो रहने कुरै भएन। बिश्वमा कोभिड बाट ३२ करोड जनताहरु संक्रमित हुंदा करिब ३२ लाख जति जनताहरु को ज्यान गइसकेको छ। नेपालमा पनि कोभिड संक्रमण बाट करिब ३२ सय जति ले ज्यान गुमाईसकेका छन्।
कोभिड नियन्त्रण गर्न बिश्व न‌ै सक्रिय रुपमा लागि रहदा बिभिन्न खोपहरुको विकास भए पनि भाईरसले रुप फेर्दा खोप प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन।
यस संक्रमणबाट सबै क्षेत्रहरु प्रभावित भएका छन्। बिश्व सहित खासगरी नेपालमा हुनेखाने बर्ग भन्दा हुंदा खाने बर्ग अर्थात श्रमिक बर्ग यसबाट उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन्। यस्तो बेलामा बिशेषगरी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुले कुनै निकायहरु मार्फत राहात को अनुभुति समेत गर्न सकेका छैनन्। ब्यबसायीहरु श्रमिकहरु माथि हावी भएका छन्। राज्यले श्रमिकहरुको पक्षमा कुनै ठोस निर्णय दिएर कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन। महंगी,कालाबजारीले आकाश छोएको छ। कुरा सुन्ने निकाय नै नभएपछि ट्रेड युनियनहरु पनि निरिह बन्न बाध्य भएका छन्। तर ट्रेड युनियनमा हुने ब्यक्तिहरु पनि सामुहिक हक र हितलाई कायम राख्न इमान्दारिताका साथ अघि बढ्न पर्छ र श्रमिकहरुले पनि नेतृत्व प्रति बिश्वास गर्न सक्नुपर्छ।
श्रम सबैले गर्छन तर श्रमको उचित मूल्य मजदुरले प्राप्त गरेको छ वा छैन भन्ने कुरा महत्त्वपुर्ण हो । मजदुरको चुहिएको पसिनाको मूल्य र सम्मान पाउन सक्नु नै श्रम दिवसको सफलता हो, होइन भने मजदुर युनियन बनाउने राजनीति गर्नेहरुको कमि छैन यहाँ ।
आपसी झगडाले श्रमिकहरुलाई फाईदा गर्दैन। यो संक्रमणकाल हो,संक्रमणकालमा बिचार, सिद्धान्तमा एकमत नहुदा पनि ईस्युमा ब्यबसायीहरु एक देखिएका छन् तर श्रमिकहरु बिच आपसी द्वन्द, मनमुटाव बढ्दै एकरुपता देखिएको छैन। समय सहज हुंदा सबै आफ्नै कारणले भएको र परिस्थिति असहज हुदा युनियनले के गर्यो भनेर धारेहात लाउने संख्या बढ्दो छ। यो दु:खलाग्दो कुरा हो।
त्यसैले समय कसैको बशमा छैन, यो परिस्थितिको सामना गर्न हामी प्रथमत: सुरक्षित रहन आबश्यक छ। त्यसैले कोभिड लाई परास्त गर्दै आफ्नो रोजगारीको रक्षा गर्न मजदुरहरुलाई यस बिश्व मे डे अर्थात मजदुर दिवस ले बिशेष आत्मबल तथा प्रेरणा प्रदान गरोस्। अन्तरास्ट्रिय मजदुर दिवस २०२१ को सबैलाई शुभकामना !
सुरक्षित रहौं ! घरमै बसौं !!